पैसाको कुरामा श्रीमतीलाई ढाँट्छन् पुरुष, यसरी पत्ता लाग्न सक्छ - Mitho Khabar
पैसाको कुरामा श्रीमतीलाई ढाँट्छन् पुरुष, यसरी पत्ता लाग्न सक्छ
June 18, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on पैसाको कुरामा श्रीमतीलाई ढाँट्छन् पुरुष, यसरी पत्ता लाग्न सक्छ
वैवाहिक जीवनमा सबै कुरा जीवनसाथीलाई बताउनु जरुरी नहुनसक्छ तर कुनै कुनै कुरा जीवनसाथीलाई ढाँट्दा सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । विशेष गरी आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित कुरा श्रीमतीलाई ढाँट्दा अविश्वासको स्थिति पैदा हुनसक्छ । महिला-पुरुष दुवैले यस्तो गर्ने भए पनि पुरुषहरू श्रीमतीका अगाडि आफ्नो आम्दानीका विषयमा सबै कुरा खुलस्त बताउँदैनन् । खर्चका विषयमा श्रीमतीसँग के के कुरा लुकाउँछन् त पुरुष ? हेरौँ,
आम्दानी: श्यामकृष्ण श्रीमतीलाई आफ्नो तलब आफूले पाउनेभन्दा कम मात्र बताउँछन् । उनी मासिक ६० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् तर श्रीमतीसँग आप\_m नो कमाइ मासिक ४५ हजारजति हुने बताउँछन् । यति रकमले महिनावारी खर्च चलाएर केही रकम वचत होस् भन्ने उनको चाहना छ । आफ्नो वास्तविक तलब थाहा पाएपछि श्रीमतीले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि कुनै महंगो सामानको माग गर्ने हो कि भनेर डराउँछन् श्यामकृष्ण । उनको श्रीमतीमा आफूलाई अरूसँग दाँजेर देखावटी खर्च गर्ने बानी छ । त्यस्तै रीता पनि आफ्नो आम्दानीका विषयमा श्रीमान्सँग यसकारण झुटो बोल्छिन् कि आफ्नो कमाइ सुनेर श्रीमान्को अहम्मा चोट नपुगोस् । के गर्ने ? : हरिराज र रीताले आप\_mना जीवनसाथीका विषयमा जे अनुमान गरेर उनीहरूलाई ढाँटेका छन् वास्तविकता त्यस्तो नहुन पनि सक्छ तसर्थ आफ्नो जीवनसाथीसँग खुलेर कुरा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आपसी विश्वास एवं सद्भाव वृद्धि हुन्छ । आफ्नो भविष्यको योजना यसकारण फाइदाजनक छ, आप\_mना बालबच्चा तथा आफूहरूकै हितका लागि बचत रकम खर्च गर्ने हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझाउन सके जीवनसाथीले पनि त्यसप्रति गुनासो गर्दैनन् ।
खर्च : सुजन आफ्नो खर्चको विषयमा श्रीमतीलाई कहिल्यै साँचो कुरा बताउँदैनन् किनभने उनलाई लाग्छ श्रीमतीले त्यसप्रति प्रश्न उठाउँछिन् वा त्यसलाई गलत ठहर्‍याउँछिन् । जब कि सुन्दरकी श्रीमती पल्लवीको गुनासो छ- सुजन साथीभाइका अगाडि बाहिर खर्च गर्न डराउँदैनन् तर घरखर्च दिन भने जहिल्यै कन्जुस्याइँ गर्छन् । आफू गृहिणी भएकाले घरखर्च चलाउनु र त्यसैबाट आफ्नो पर्सनल खर्च पनि गर्नुपर्दा सुजनले दिने पैसा महिना पूरा नहुँदै सकिन्छ । यसै विषयालई लिएर श्रीमान्-श्रीमतीबीच प्रायः ठाकठुक परिरहन्छ । के गर्ने ? : यस्तो अवस्था भए सबैभन्दा पहिले घरको बजेट बनाउनुपर्छ । जसमा श्रीमान्-श्रीमती दुवैको पर्सनल खर्च, सन्तानको फिस तथा अन्य खर्च, रासनपानी एवं अन्य भैपरी आउने खर्चका लागि आफ्नो हैसियतअनुसार निश्चित रकम छुट्याउनुपर्छ । यो नियमलाई कडा ढंगले पालन गरे घरझगडा हुन पाउँदैन ।
बचत तथा सम्पत्ति : गोपाल आफ्नी आमालाई असाध्यै सम्मान गर्छ । उसको आमा र श्रीमती उर्मिलाबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । उसले आफ्नो बचत रकमबाट काठमाडौंमा एक रोपनी राम्रो जग्गा किन्यो तर श्रीमतीलाई सुँइकोसम्म दिएन । बिमा तथा बैंकमा रहेको बचत रकममा समेत उसले आमा तथा भाइबहिनीलाई हकवाला राख्यो । अचानक एकदिन दुर्घटनामा उसको मृत्यु भयो, श्रीमतीलाई उसको सम्पत्तिका बारेमा सबै जानकारी थिएन । घरका कसैले पनि उसलाई राम्रो व्यवहार नगरेपछि र थोरै मात्र सम्पत्ति दिएर छुट्याइदिएपछि उर्मिला अभावको जीवन गुजारिरहेकी छिन् । के गर्ने ? : कतिपय श्रीमान्-श्रीमतीहरू एकअर्कालाई आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण जानकारी दिन आवश्यक ठान्दैनन् वा चाहँदैनन् । कतिपय अवस्थामा श्रीमतीलाई यसप्रति चासो पनि हुँदैन, त्यसैले उनलाई बताइँदैन । यस्तो गर्नु जीवनसाथीप्रति धोका हो । सम्बन्धको हरेक पाटो सदैव पारदर्शी हुनुपर्छ, कुनै सम्पत्ति खरिद गर्दा, लगानी गर्दा वा बैंक अकाउन्ट खोल्दा वा बिमा गर्दा श्रीमतीलाई नै हकवाला बनाउनु राम्रो हुन्छ । अन्यथा आफूलाई केही भइहाले श्रीमतीले दुःख पाउन सक्छिन् ।
ऋण : सबैभन्दा बढी झुटो ऋणकै विषयमा बोलिन्छ । खर्च गरिने रकम तथा ऋणका एकअर्कालाई जानकारी नहुँदा समस्या हुनसक्छ । श्रीमतीको कमाइ छैन र केही गरी श्रीमान् तलमाथि भए श्रीमतीले असाध्यै दुःख पाउँछिन् । परिवारमा आर्थिक संकट पर्छ । के गर्ने ? : क्रेडिट कार्डबाट लापरवाहीपूर्ण तरिकाले खर्च गर्दा वा ऋण लिनुअघि जीवनसाथीलाई जानकारी नदिनु खतरा हुनसक्छ । साथै आफ्नो हैसियतभन्दा बढी ऋण लिनुअघि निकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।
श्रीमान्ले केही लुकाउँदै छन् भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? : -आफ्नो जीवनसाथीको व्यवहारमा अचानक परिवर्तन भएको छ ? उनी अचानक चिडचिडे वा रिसाहा भएका छन् ? उनी तपाईंको खर्चलाई लिएर प्रश्न उठाउँछन् ? यस्तो हो भने सावधान हुनु आवश्यक छ । जब कुनै व्यक्ति केही गलत काम गर्छ वा केही कुरा लुकाउँदै छ भने उसले अरूमाथि प्रश्न उठाउँछ वा रिसाउँछ । -जीवनसाथीको व्यक्तिगत खर्च, क्रेडि कार्ड, फोनको बिल आदि अचानक बढेको छ भने ध्यान दिनु आवश्यक छ । -हिजोआज धेरैले बैंक ट्रान्जेक्सन गर्छन् वा अनलाइन किनमेल गर्छन् । श्रीमान्ले श्रीमती आउनेबित्तिकै कम्प्युटर वा मोबाइल बन्द गर्छन्, त्यहाँ के गरिएको छ भन्ने देखाउन चाहँदैनन्, ट्रान्जेक्सन देखाउँदैनन् वा पासवर्ड दिँदैनन् भने कुनै कुरा लुकाउन खोज्दै छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
नेपालमा यो विषयमा अनुसन्धान भएको छैन । विदेशमा भएका रिसर्च यो विषयमा के भन्छन् त ? : -४२ प्रतिशत पुरुष आफ्नो आम्दानीको विषयमा झुटो बोल्छन् । -५६ प्रतिशत पुरुष श्रीमतीलाई जानकारी नदिई खर्च गर्छन् । – ३९ प्रतिशत महिला दाम्पत्य जीवनमा रकमका विषयमा बोलिने सानातिनो झुटलाई सामान्य मान्छन् । १६ प्रतिशत महिलाको विचारमा श्रीमान्ले सानातिना खर्च गर्नुसम्म त ठीकै छ तर ठूलो रकम खर्च हुँदा भने श्रीमतीलाई जानकारी दिनुपर्छ ।